ढुङ्गा प्रहार गरी सल्यानमा एकको हत्या – Sadarline
सदरलाइन संवाददाता १५ मंसिर २०७७, सोमबार ०८:३१
सल्यान : ढुङ्गा प्रहार गरी सल्यानमा एकजनाको हत्या गरेका छन् । बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका–५ राउचेका २८ वर्षीय शेरबहादुर साहुले सोही ठाउँका ६६ वर्षीय दुर्गाबहादुर बादीको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
आइतवार बेलुका ७ बजे नाथेखोलाबाट घर फर्कने क्रममा भारचौर खोलामा बादीलाई पछाडिबाट ढुङ्गाले हानेर हत्या गरेको प्रहरी प्रमुख गोविन्द थापाले जानकारी दिए । घटना बेलुका ७ बजेको भएपनि स्थानीयले प्रहरीलाई साढे ८ बजे मात्रै खबर गरेको उनको भनाइ छ ।
हत्या गर्ने युवकको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको पाइएको थापाले बताए । फरार रहेका युवकको खोजतलाश भइरहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
खजुरा (बाँके) : बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १५ शैया अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्ति गर्दै १५ शैया अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको हो । नेपाल सरकार संघको बजेट मार्फत निर्माण हुने खजुरा अस्पतालको बाँके क्षेत्र नं. ३ का सांसद नन्दलाल […]
१४ आश्विन २०७५, आईतवार ११:०७